IAluminiyam iyeyona nto ilungileyo kwabanye abenzi beemoto. Iimoto ezinemizimba yealuminium zinamandla amakhulu okuphucula uqoqosho lwamafutha, ukumelana nefuthe kunye nokuphatha. Uninzi lwabathengi kwihlabathi liphela libona ikamva leemizimba yealuminium kwaye likholelwa ukuba ezi zinto ziya kukhuthaza ukuphuculwa kweshishini lezithuthi.
IAluminiyam ipleyiti yenziwa ngendlela efanayo nepleyiti yentsimbi, ifudumeza intonga ukuya kuma-degrees ezingama-538 Celsius kunye nokuqengqeleka phakathi kweerolitha ezimbini ukuyinika imbonakalo eflethi. Ukusukela kulo mzuzu kuqhubeke, la malungiselelo okuqala aya kwenziwa ngeendlela ezininzi, ukusuka phantsi kwe-lemonade ukuya kumngxunya okanye njengesixhobo sokwenza iimoto, inkqubo iyafana, umahluko kuphela lutshintsho ekubunjweni kweekhemikhali. Izinyithi ezikhanyayo ezisetyenziselwa kushishino lweemoto zinokufikelela kwi-15 iialuminium ezahlukeneyo kwaye ziqiniswa ngobhedu kunye nesilicon.
I-aluminium akukho lula ukuba i-weld. I-alumina kumphezulu wezinto inokutsala lula igesi, ngaloo ndlela yenza umsantsa kwi-weld, ngaloo ndlela yenze buthathaka i-weld. Endaweni yoko, iipleyiti ze-aluminium zisebenzise amandla aphezulu kunye nokuzingena ngokwakho.
Ngophuhliso lwetekhnoloji, oomatshini abazihambelayo baphendukele kwiinkqubo ezintsha, baphinda bahlanganisa imigca yendibano, bathatha indawo yomgangatho etsha ngohlobo olutsha lwe-laser welding, batyalela izigidi zeedola ekuvuseleleni ukuthunyelwa. I-Rivet yinto entsha nedala, xa ikhethini lixhonywa emotweni, inkqubo ye-welding iphambukile kwinkoliso yeendawo zesicelo kumgca wendibano.
Bahlaba umhlaba wentsimbi ngaphandle kokufudumeza, iintlantsi kunye nesosi. Kodwa baya kuzikhusela ngokuqinileyo izinto ngokwenza i-welding spot, bathenge izixhobo ezintsha ngeendleko eziphantsi, kwaye bahlaziye umgca wokuhlangana wensimbi ngeerobhothi ezibizayo zokuthenga. Ukuphinda uphinde ube nenye inzuzo ebalulekileyo: irobhothi inokubona ngokulula ukuchaneka kwesikhundla se-rivet, esinefuthe elihle kumgangatho womsebenzi. Lungisa izinto zokuqinisa ezi zinto ngokubambisa imingxunya kwiipleyiti ze-aluminium ezininzi kwaye uzilungelelanise kunye kwinkqubo. Isikali siya kuvelisa ubushushu kwinkqubo yokujikeleza kwaye xa iziqwenga ezininzi zedlula, kwaye ukufudumeza kuya kubangela isinyithi ukuba sandise. Njengoko iyaphola, umngxunya uyancipha, uqinise izikhonkwane, kwaye udala uqhagamshelo oluluqilima. Le teknoloji yokuhombisa ngokukhawuleza isetyenziswa ikakhulu ngabazenzisi baseYurophu. Izibonelelo zayo zingabizi, zilula, kwaye akufuneki ukufaka izixhobo ezikhulu ezibizayo.
Kuba i-aluminium ayinazibuthe, iinkampani zeemoto kufuneka zithathe indawo yazo yendibano. Sebenzisa i-vacuum grip endaweni yegranti yomazibuko ukuthwala izinto ezenziwe ngentsimbi. Ukongeza, iingenelo zokuveliswa kwemoto yealuminiyam ziye zaqatshelwa, ukunciphisa isiphithiphithi kwindibano zocweyo nezixhobo. Xa kuthelekiswa neelder clumsy welder egxile kuyo, izixhobo zokwenza i-aluminium zisebenza ngakumbi. Isithuba esingaphezulu, ingxolo engaphantsi. Kuba lula ukuba iinjineli zisebenze kumzi-mveliso phantsi kweemeko ezinjalo.